Na dia tsy mbola fantatra mazava aza ny andro hanaovana ny fifidianana ben’ny tànana, efa mandindra ny asa ahafahana mamita ny lisim-pifidianana ny eny anivon’ny fokontany, toy ny ao Antetezanafovoany. Manodidina ny 20 ireo feno 18 taona mihoatra tsy tafiditra tao anatin’ny lisi-pifidianana farany teo raha ny tatitra azo avy amin’ny fokontany Antetezanafovoany. Ny tsy fanaraha-mason’ireo mpifidy ny anarana anaty lisitra sy ny tsy fanamarinana ny fifindra-monina no hita fa nahatonga io hamaroana io, raha ny fanazavana hatrany. Hisorohana ny korontana sy ny fifanomezan-tsiny, efa mandrindra ny lisi-pifidianana sy miditra amin’ny fanentanana maro isan-karazany ny fokontany.
Mbola manana fotoana malalaka anefa ireo feno 18 taona no mihoatra tsy tafiditra anatin’ny lisi-pifidianana nampiasaina farany teo sy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena, mba isorohana indray ny korontana toy ny teo aloha.